Suuraan kun kan kaafame Godina Gujii Lixaa Magaalaa Bulee Horaatti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSuuraan kun kan kaafame Godina Gujii Lixaa Magaalaa Bulee Horaatti.
Gaafa suuraan kun kaafamu namoota suuraa kanarra jiran dabalatee Koloneel Abbebee Garasuus achi ture. Ani akka carraa tahee Haramaayaa ture. Erga galellee hardha namaan wal-argee oduu qabatamaa fuudhe.#Suuraa_Kana
Via: Gamachis Bali Jilo
Waltajjii kanarratti dargaggoonni godinaalee Gujii lamaaniifi Booranaa hirmaatanii jiran. Dhaadannoon waltajjii kanaa “We are collecting best minds” jedha ture.
Erga ajandaan marii dhihaateen duuba mataa duree irraa eegalee gaaffiin deebii hin qabne akka bokkeya gannaa haala armaan gadiitti roobuu eegale.
1. ‘Best Mind’ isin baantan Hayiluu laakkofsa ummata Gedoo woliigalaa adoo hin beekin “Gujiin Gedoo 800,000 buqqisee waan jiruuf seeratti dhihaachuu qaba nama jedhe kanaa?
2. Koloneel Abbebee Garasuu nama gaafa RIB Gujii Dugda Daawwaa, Galaanaa, Daraaraa, fi Booranaatti misiroota fixxe “Shanee fixe” jedhaa mootummaaf wabii tahaa turee?
3. Bilxiginnaan “Best Mind” guutamte jettan kan akka Leenchoo Baatii fa’a adoo networkiin Lixa Oromiyaarraa baddee jirtuu miidiyaa addunyaatiif akka womaa hin tahinii gabaasaa ture sanii?
4. Bilxiginnaan isin nutti faarsitan tun akka Oromoofi Oromiyaa balleessuuf deemtu hubachuu keenna quba qabdanii duuba?
5. Bilxiginnaa keessa garee mataa ifii bilxigoomsuu feetu malee gareen dhugaa saba kanaa baasuu feetu guyyaa guyyaan adamfamtee ari’amuun isii Oromoofi Oromiyaa akka bakka hin buune beekuu keenna beektuu?
Gaaffii Nageessaa fi Daani’eelii dhihaatte.
1. Isin dhuguma yennaa Taayyee fi Hayiluu guyyaa guutuu Oromoo abaaraa ooltu woliin Gujii dubbisna jedhaa dhuttanu hin qaanfattanuu?
2. Wonni isin biyya Faranjiitii dhuttaniif dhuguma ummata kanaaf rakkoo furuuf moo jireenna isinta qaalaye salphifachuuf?
3. Yoo dhuguma saba kanaaf yaaddan iteete maaf gaafa ummanni kabajaan galaa ture hin galin?
4. Ammas teenaan ilmaan teennaa baga nageyaan nuu dhuttan; garuu yoo Gujii qabsiistanii teessuma o’aa feetan iteete Gujiin kan isin dur beettan kaan adoo hin teene adeemsa biyya kana hunda hubatee balaa amma keessa jiru kana keessaa bayuuf tattaafataa jira malee eennuuf gabaa tahuufii moti.
Waan arman olii kana hardha dhaga’e. Dhugaa dubbachuuf qabxiileen armaan olitti kahaniifi kan ani hin tuqinille hedduutti jira. Walumaagalatti waltajjiin sun akka isaan yaadanitti adoo hin milkahin hobba’e. Gaaffilee armaan oliitiif deebiin takkan adoo hin deebi’in suuraa ka’anii miiluma dhufaniin gara Finfinnee deebi’an.
Milkii dhabuu isaatiif ammoo kan komatamaa ture mucaa qindeessi jedhaa ittigaafatamummaa itti kennan ture. Milkii dhabuu isaanii kanarratti kan muftan amma jumlaan ummata nageyaa gara hidhaa guuraa jiran malee miidhaa Gujiitiif dhimmamanii moti.